Mitady Fanohanana Avy Amin’ny Vahoaka ny Fikambanana Mpanao Tantara An-dampihazo iray Hamokarana an’Ity Tantara an-tsehatra “Mahery vaika” mikasika ny fifankantiavan’olon-droa mitovy fananahana ity any Kioba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jolay 2014 14:25 GMT
Tany Lôndôna no nolalaovina voalohany ny “Bent” tamin'ny 1979 (Sary navoaka tao amin'ny Indiegogo)
Nanatanteraka fampielezan-kevitra tao amin'ny Indiegogo ny fikambanana mpanao tantara an-tsehatra any Havana, “La Peña Meisner”, mba hanangonana 15,000 vola Britanika, na eo amin'ny 25,000 dolara Amerikana eo, mba hamokarana sy handefasana ny “Bent” any Kioba, lalao an-tsehatra mikasika ny fanenjehana ny olona roa mitovy fananahana mifankatia tany Alemana Nazi.
“Tantara an-tsehatra sahisahy sy mahery vaika mikasika ny fanararaotana sy ny fanagadrana ny olon-droa mitovy fananahana mifankatia tany Alemana Nazi izay nitondra nankany amin'ny Ady Lehibe II sy ny fikarohana ny faneken'ny tsirairay ary ny faneken'ny fiarahamonina ny maha-izy azy ny olona iray ny Bent”, hoy ny pejin'ny fanangonam-bola.
Araka ny voalazan'ilay vondrona mpanao tantara an-tsehatra izay tsy ofisialy ary tsy tohanan'ny fanjakana Kiobana ara-bola, sady ahitana ireo mpilalao sarimihetsika sy tale eo ambany fahefan'ny tale Britanika Stephen Bayly, dia “mbola tena matanjaka any Kioba amin'izao fotoana izao sy manerana ny tany ireo lohahevitra voafakafaka anatin'ity asasoratra mahazatra ity, raha ny fanenjehana sy ny tsy rariny mahazo ireo pelaka no jerena.”
Nahazo tsikera maro ny Lalàna Kiobana vaovao Mifehy ny Asa, izay nankatoavina vao haingana tany amin'ny firenena Karaiba, noho ny tsy fahampian'ny fanekena mazava ny maha-izy azy ny olona iray ho isan'ny antony mahatonga ny fanavakavahana, ka mamela ny olona niova fananahana ho amina toerana marefo. Araka ny tantara dia niaritra fanavakavahana sy fanenjehana ny vondrom-piarahamonina LGBT any Kioba, kanefa tanatin'ireo taona lasa kosa dia nanao dingan-dava izy ireo teo amin'ny fitakiana ny zony. Mazava ho azy, mbola betsaka ny asa miandry.
Notohanan'ny Masoivoho Britanika sy Norveziana ara-bola, miaraka amin'ireo Kiobana mpanohana, ny vokatra teo aloha nataon'ny vondrona izay nitondra ny lohateny hoe ” Azul/Naranja”. Na izany aza, tetikasa manana tanjona ambony kokoa ny “Bent” izay nahazo fanampiana ara-bola avy any Norvezy ihany koa.
Manamarika tsara ny sehatra Indiegogo fa ny vola azo dia hampiasaina amin'ny fifanarahana eo amin'ny toerana famerenana sy ny sehatra, ny hira, ny jiro, ny dokambarotra, ny fanontana sy ny endriky ny sarisary, ny akanjo sy ny kojakoja, ny fandraketana anaty lahatsary an'ilay famokarana, sy ireo mpilalao, tale ary ny saran'ny sidin'ny mpamokatra, anivon'ireo vola lany hafa.
Fitambaran-javatra enina samy hafa tanteraka ireo endri-bokatra notakiana tao anatin'ny Fizarana Voalohany, ary fananganana toerana fampivangongona koa no ao amin'ny Fizarana Faharoa. Ireo akanjo sy ny haingony dia ahitana ny fanamiana Nazi karazany rehetra, na ny SA na ny SS, ireo fanamiana miovaovan'ny gadra, ireo solovolo mifanaraka tsara, ny basy tsy voafahana, solomaso vita amin'ny tandroka, antsy fampiasa anaty tantara an-tsehatra, sns.
Nilaza i Bayly fa “tena mirehareha amin'ny fandraisany anjara anatin'ity vanim-potoanan'ny tantara any Kioba ity ny tenany. Tanatin'izay taona naha-teto Kioba ny tenako izay, nisy fitomboan'ny fanairana amin'ireo ny olana momba ny LGBT (…) Ka mety hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny hevitry ny vahoaka ny fampisehoana ny Bent (…).”
Namadika ity fikambanna ity ho lohalaharana ao Amerika Latina noho ny fomba filalaovany ny filalaovana maneho ny zava-misy marina nitranga nataon'ny La Peña Meisner. Tamin'ny Febroary 2012 no niandohan'ny vokatr'izy ireo “Las Tumbas Olvidadas”, izay notanterahina nandritra ny “British week” tany Havana.
Tamin'ny Jona 2013 ry zareo no nanatanteraka ny “Azul/Naranja,” izay nahazoan'ireo mpandray anjara Idalmis Garcia sy Héctor Noas fanendrena roa ho an'ny Premios Caricato, isan'irony marim-pankasitrahana tena ambony amin'ny fahaiza-milalao any Kioba irony.
Tany Londres, tamin'ny 1979 no natao ny fanatanterahana voalohany ny “Bent”, niaraka tamin'i Ian McKellen sy i Tom Bell teo amin'ny toeran'ny mpandray anjara fototra. Eny tokoa, hita anatinà lahatsary fitadiavana vola avy amin'ny vahoaka i McKellen. “Notanterahina manerana izao tontolo izao ilay tantara an-tsehatra, ary tena faly aho fa tonga any Kioba ihany izy ity ankehitriny,” hoy izy. “Ary na taiza na taiza no nanehoana azy ity, dia heveriko fa tsapan'ny olona ny mahazava-dehibe izany eo amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana.”
Tamin'ny 1980, nolalaovina tany amin'ny tanànan'i New York ny “Bent”, niaraka tamin'i Richard Gere. Nahazo ny Marim-pankasitrahana Pulitzer io tantara an-tsehatra io tamin'ny 1980, ary nandrombaka ny Marim-pankasitrahan'ny Filalaovana Tantara An-tsehatra Tsara Indrindra avy amin'ny Dramatist Guild. Navadika horonantsary izy ity tamin'ny 1997 teo ambany fiadidian'i Sean Mathias.
Nifarana tamin'ny 23 Jolay ny fampielezan-kevitra fitadiavam-bola avy amin'ny vahoaka.